नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब र भावी यात्रा :: Rajendra Gautam
Rajendra Gautam मुख्य पृष्ठ > नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब र भावी यात्रा Search site Search site
नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब र भावी यात्रा
दोस्रो - हामीहरुको सहमतिबिना परिबर्तनको 'प' पनि सम्भव हुादैन । यस्तो अवस्थाबारे जानकार रहादारहादै हामीलाई निषेध गरेर मेरो बिपक्षी कुरा गर्नु ब्राजिलियनहरुले सामान्य बोलचालमा हुन्न भन्न हो भनेजस्तै हो । अहिले त्यही पन सदस्य गठबन्धनमा देखिएको छ ।
तेस्रो - उनी प्रति यो क्लबका सामाजिक सदस्यहरुले गरेको सबैभन्दा कृतघ्नताको पराकाष्ठा हो । व्यक्तिको योगदानको कदर र अभिनन्दन जीवनकालमै गर्नुपर्छ । जतिसुकै उनीसग विचारधारात्मक रुपमा असहमत भए पनि र जसले जेसुकै भने पनि अहिलेसम्म बिपनाले तय गरेको सामाजिक यात्रा र संस्थागत गर्न खोजेको नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब, काठमाण्डौ खोल्ने व्यक्ति उनी नै हुन । नेपाल युथ भलुन्टरी क्लबको गुल्मीको दिब्रुङ बैठकपछि विकसित घटनाक्रम हो । यो बीचमा नेपाल युथ भलुन्टरी क्लबले आफ्ना सदस्य थामथुम गर्न नारा जे लागए पनि प्रतिस्पर्धात्मक सामाजिक व्यवस्थामा अवतरण गर्ने कार्य उनको देन हो । असहमति रुपमा पहिले भनेजस्तो क्लब अगाडि लानै सकिादैन भन्ने मान्यता नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब नेतृत्व स्थापित गर्ने उनै हुन्, नेतृ बिपना भए पनि । यसको लागि राजेन्द्र व्यक्तिगत रुपमा अनेकौं लाञ्छनाको सिकार भएका छन् । उनी आफ्नै क्लबभित्र सबैभन्दा बढी आक्रमणको सिकार भएका छन् । राजेन्द्रलाई सहानुभूति राख्ने उनको क्लबभित्रभन्दा बाहिर बढी होलान् ।
अहिलको अवस्थाको सामाजिक यात्रा गर्नुपर्छ भनेर वकालत गरेकै नाममा राजेन्द्र क्लबमा कारबाहीका भागीदार भए । व्यक्तिगत रुपमा अनेकन आरोप, गालीगलौजको भागीदार बनाइए र चरम मानसिक यातनाको सिकारमसेत भए । तर, क्लब लागि उनी आˆनो इमानदारीबाट चुकेनन् । क्लबमा बिहारी शैलीकै भए पनि आपसी सम्बन्धको आधार स्थापित हुनैपर्द भन्ने यिनकै मान्यताका कारण नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब यहाासम्म आयो । राजेन्द्रले समाज रुपान्तरणका लागि व्यक्तिगत रुपमा ठूलै त्याग गरेका छन् । एक प्रतिभाशाली योजनाकार र त्यस्तै क्षमतावान पनि हुन् उनी । व्यक्तिगत सुखको खोजीमा हिाडेका भए निजी जीवन धेरै उन्नतस्तरमा बिताउन सक्थे । तर, उनी मर्ने डर नराखी हिाडे । व्यक्तिगत रूपमा उनले विगतमा हिाडेको बाटो मेरा लागि कहिल्यै स्वीकार्य थिएन र भएन । तर, उनी त्यो साहसको जहिल्यै प्रशंसक रहे । त्यसकारण उनी मेरो नजरमा सम्मानित सामाजिक युवा नेताको रुपमा रहेका छन् । यस्तो धारणा धेरैको रहेको छ भन्ने मेरो विश्वास पनि छ । त्यस्तै आफू जोनल रेप्रिजेनटेटिभ भएका बेला राजेन्द्रले एक पटक फेरि आˆनो श्रेष्ठता दर्ज गरेका छन् । यसबीच उनले देश र समाज प्रतिको इमानदारी प्रमाणित गरिसकेका छन् । क्लबइस्रतरका सामाजिक क्लबहरुमा समेत बिपना र अन्य नेताभन्दा गौतम आक्रमणको सिकार बन्छन् अक्सर । किनभने, क्लबको योजनाकार तथा गुदी उनी हुन् भन्ने आम बुझाइले उनलाई निस्तेज गर्न उनीमाथि आक्रमण बढी हुने गर्दछ ।
यस्तो अवस्थामा राजेन्द्र गौतम कमिटीको सभापति हुने सबैभन्दा उपयुक्त उम्मेदवार हुन् । नेपाल युथ भलुन्टरी क्लबको डिजाइनर तथा यसको प्रमुख आर्किटेक्चर पनि उनै हुन । यसमा उनको लगानी छ । त्यसकारण समाज संस्थागत गर्न नयाा कमिटी निर्माण गर्ने कार्यमा उनीजतिको योग्य व्यक्ति को हुन सक्ला र ? यदि उनलाई यस पदमा जान रोक्नु भनेको सहमति र सहकार्यलाई निषेध गर्नु त हो नै, अहिलेसम्मको क्लबले तय गरेको सामाजिक यात्रासमेत गलत थियो भन्नु हो । आˆनो बच्चाको माया जन्म दिनेलाई मात्र यहसास हुन्छ र त्यो गौतममा रहेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो क्लबलाई यो प्रक्रिया बाहिर जान नदिन र क्लबको समाजप्रतिको प्रतिबद्धता जााच्ने अवसरका रुपमा पनि गौतमलाई सभापति बनाउनुपर्छ । नेपालीमा उखानै छ - चोरको हातमा तालाचाबी । यदि अरु सदस्यसग विश्वास छ भने!
(प्रस्तुत लेख नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब, बाग्लुंगको मासिक पत्रिकामा समेत प्रकाशित भएको हो) - सिम्रिका श्रेष्ठ
(जिल्ला रेप्रिजेनटेटिभ, नेपाल युथ भलुन्टरी क्लब, बाग्लुंग)
Yuva Nepal Sangathan